Midowga Yurub oo hakiyay dhaqaalihii uu ku taageerayay Itoobiya | Universal Somali TV
Midowga Yurub ayaa hakad geliyay dhaqaalihii uu siin jiray dalka Itoobiya, illaa iyo inta hay'adaha gargaarka looga ogolaanayo in ay galaan Gobolka Tigrayga, gargaarkana u gaarsiinayaan dadka kuwooda u baahan.
Midowga Yurub ayaa walaac xoogan ka muujiyay hawlgalka Ciidamada Federaalka Itoobiya ee bishii November ku galeen gobolka waqooyiga dalkaasi dhaca ee Tigray.
Madaxa Arrimaha Dibadda ee Ururka Midowga Yurub, Josep Borrell ayaa sheegay in xaaladda ka taagan gobolkaasi ay haatan dhaaftay hawlgal amarka iyo kala dambeynta lagu soo celinayo.
Bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay inay helayaan warbixino isa soo taraya oo ku aadan in qowmiyad gaar ahi lagu bartilmaameedsanayo gobolkaasi, dhac baahsan, kufsi, celinta khasabka ah ee qaxootiga iyo suurtagalnimada dembiyo dagaal.
Josep Borrell, Madaxa Arrimaha Dibadda ee Midowga Yurub ayaa tibaaxay in laba milyan oo qof oo ka barakacay dagaalka Gobolka Tigray ay aad ugu baahan yihiin gargaar bani'aadanimo, balse ay adag tahay gelitaanka gobolkaasi.
Tani ayaa keentay in Midowga Yurub uu joojiyo boqol iyo toddobo milyan oo dollarka Mareykanka uu ku taageeri jiray ciidamada iyo hawlaha guud ee dowladda dalkaasi.
Xukuumadda Addis Ababa ayaan weli ka hadlin bayaanka ka soo baxay Midowga Yurub ee looga joojiyay dhaqaalihii lagu taageeri jiray, waxaase suurtagal ah in saacadaha soo socda ay ka falceliso.
Kan-xigaJoe Biden oo maanta lagu wado in uu x...
Kan-horeWasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda It...
59,515,837 unique visits